अनौठो ‘घटना’ : मोटी श्रीमतीले ‘थिच्दा’ श्रीमानको मृ,त्यु ! – Khabar Patrika Np
अनौठो ‘घटना’ : मोटी श्रीमतीले ‘थिच्दा’ श्रीमानको मृ,त्यु !
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ०९, २०७८ समय: १६:४०:५९
रसियामा एउटा अनौठो ‘घटना’ घटेको छ । श्रीमतीले आफ्नै श्रीमानलाई ‘थिचेर’ मा-रेको ‘घटना’को खबर अन्तराष्ट्रिय मिडियाहरुले छापेका छन् । श्रीमान श्रीमतीबीच ‘विवाद’ भएका बेला ‘रिसाए’की १ सय १ किलो तौलकी श्रीमतीले माथि चढेर ‘थिच्दा’ ती श्रीमानको मृत्यु भएको हो ।
रुसका यी दम्पतीबीच कुनै कुरालाई लिएर ‘विवाद’ सुरु भएको थियो र ‘विवाद’ बढ्दै गएपछि क्रममा श्रीमती तात्याना ओ म-दिराको न-शामा थिइन् । श्रीमतीले श्रीमान एइदरलाई ‘माफी’ माग्न भनिन् तर श्रीमानले ‘माफी’ मागेनन् । त्यसपछि रिसमा श्रीमती श्रीमानमाथि चढेर उनको ‘टाउकोमा बसिन् ।
उनी माथि चढेपछि उनका श्रीमानलाई सास फेर्न गाह्रो हुन थाल्यो । तर, श्रीमतीलाई श्रीमानले ‘सास फेर्न’ नसकेको कुरा थाहा भएन । श्रीमती श्रीमानमाथि त्यतिबेलासम्म बसिरहिन् जबसम्म उनका सास बन्द भएन ।यी दुईकी छोरी त्यतिबेला घरमै थिइन् । उनी दौडिएर बाहिर गएर एक छिमेकीलाई बोलाएर ल्याइन् । तर, त्यतिबेलासम्म श्रीमानको मृत्यु भइसकेको थियो ।
केही समयपछि महिलाले पनि श्रीमानको मृत्यु भइसकेको थाहा पाइन् ।महिलाले आफूले श्रीमानलाई मा-र्न नचाहेको बताएकी छिन् । श्रीमान धेरै बोलिरहेका थिए त्यसैले उनी श्रीमानलाई चुप गराउन चाहन्थिन् । यसैको लागि उनी श्रीमानको मुखमै बसिदिएकी थियन् । सुरुमा महिलामाथि ‘ह-‘त्या’को अभियोगमा मु-द्दा चलाइएको थियो ।
तर, पछि उनलाई ‘लापरवाही’ गरेर मृत्युको कारण बनेको आरोपमा ‘मुद्दा’ चलाइएको छ ।